उदित नारायण झाका छोरासँग बिहे गर्लिन् नेहा कक्कडले ? - Nepal Insider
January 9, 2020 1379
बलिउडमा जमेकी गायिका नेहा कक्कड आजभोलि ‘इन्डियन आइडल’ का कारण चर्चामा छिन् । यो शोका कारण उनको थप चर्चा चुलिएको छ ।
उनले नेपालमा कन्सर्ट गरेर पनि दर्शक झुमाइसकेकी छिन् । इन्डियन आइडलमा सहभागीता जनाउने प्रतियोगीको कहानी सुनेर नेहा कहिलेकाहीँ भावुक बन्ने गर्छिन् । यो शो भारतमा निकै हिट छ ।
‘इन्डियन आइडल’ को शोको सेटमा नेहाले बिहेको तयारी गरेको भारतीय मिडियाले लेखेका छन् । उक्त शो अझै प्रसारण भएको छैन । सेटमा नेहाले बिहे गर्ने युवकको परिवार पनि देखाइएको छ । जुन परिवारले नेहालाई बुहारी मानेको सेटमा देखाइनेछ ।
नेहाको बिहेको खबर तब चल्न थाल्यो, जब होस्ट आदित्य नारायणका बुबा आफ्नी पत्नीका साथ सेटमा पुगे । भारतीय मिडियाका अनुसार आउँदो एक एपिसोडमा उदित नारायण झा र उनकी पत्नी इन्डियन आइडलको सेटमा पुग्नेछन् । यो शोमा नेहालाई आदित्यले आफ्ना छोरासँग नाम जोड्नेछन् । र, जिस्काउनेछन् ।
बलिउडमा यतिबेला खबर फैलिएको छ, नेहाको र आदित्यको बिहे होस् भन्ने उदितनारायणले चाहेका छन् । तर नेहाले भने यसबारेमा कहिल्यै केही बोलेकी छैनिन् ।यति मात्र होइन कि, उदितकी पत्नी दीपा नारायणले पनि नेहालाई बुहारी बनाउन चाहेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
त्यसो त यो गसिपलाई कतिपयले ‘इन्डियन आइडल’ को एक हिस्साका रुपमा मत्र लिएका छन् । किनकि, होस्ट बनेका आदित्य नेहासँग जिस्किरहेको प्राय: देख्न सकिन्छ । यद्यपि नेहाले आदित्य नारायणसँग जोडी बाँध्नेछिन् कि छैनिन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।यसअघि नेहाको प्रेम कलाकार हिमांश कोहलीसँग थियो । ब्रेकअपपछि नेहा चोटमा परेकी थिइन् ।
Prevअन्तत रँगशालामा क्रिकेट खेल्न थालियो । धुर्मुश खुशीले दँग ! यस्तो बन्यो रँगशाला (भिडियो हेर्नुस)
Nextफोटोकपी मेसिनबाट नक्कली नोटको छपाइ, डिजाइनरदेखि ‘बजार प्रतिनिधि’सम्म पक्राउ
होटेल व्यवसायीलाई र’ड प्र’हार गर्दा चर्चित गायक प्रकाश कटुवाल प्रहरी खोरमा
बाँदरको विहानी- अँगेनाको छेउमा बसेर तातो चिसा सुरुप्प !
मनछुने कथा “” असल श्रीमती “” महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं अनि पुरुषले शेयर गरौँ (39623)
‘नेपालमा फेरी ८ रेक्टर भन्दा ठूलो भूकम्प जाने सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह’ – अध्ययन प्रतिवेदन (13501)
पोखराकी २६ वर्षीया सुनीता पौडेल जन्माइन ३ छोरी र १ छोरा चम्ल्याहा बच्चा (5083)
पाँच रुपैयाँमा खाना बेच्दा १५ दिनमै उठ्यो नसोचेको यतिधेरै पैसा,थामिएनन कुमारका आँसु, अब यस्तो गर्ने योजना (भिडियो हेर्नुहोस) (5051)